» DEG DEG: Madaxweyne Gaas oo u hanjabay shirkadda Saarasen, Ciidanka Puntland waa inay…
DAAWO SAWIRADA: Askar ka tirsaneyd Ciidanka Dowlada oo saakay lagu toogtay Goob fagaare oo kutaala Muqdisho
WAR DEG DEG AH : Fanaankii Caanka ahaa ee Maxamed Suleymaan Tubeec oo ku dhintay Dalka….
PUNTLAND oo Passaport-kii Soomaaliga ku xirtay shuruud beeleed yaab leh: Dhageyso yaabka taagan
Daawo: Wariyihii Waraystay Pro Galaydh Oo Waraysi Kulul kaqaaday Dr Baadiyow Sir badan oo Fakatay Iyo Waxa dhacay ?
DEG DEG: Madaxweyne Gaas oo u hanjabay shirkadda Saarasen, Ciidanka Puntland waa inay…
Jan 16, 2014 - jawaab	ShareMadaxweynaha Dowlad goboleedka Puntland C/Weli Maxamed Cali Gaas ayaa markii ugu horeysay ka dhawaajiyay in taliska ciidamada maamulka Puntland uu ka dhex jiro musuqmaasuq baahsan.
Waxa uu sheegay Madaxweyne C/Weli Gaas in dowladiisu wax ka bedeleyso hannaanka nabadda iyo dowladnimo ee maamul goboleedka Puntland, isagoona sheegay in dowladiisu ay soo celineyso cadaaladda.
“Ciidanka Puntland waxaa ka dhex jira musuqmaasuq, waxaana sida ugu dhaqsiyaha badan Dowladda Puntland ay ku soo celineysaa nidaamkii ciidamada” ayuu yiri Madaxweyne C/Weli oo sheegay inay jiraan caqabado fara badan oo ka jira cadaaladda iyo maamulka dowliga ah.
Madaxweyne C/Weli oo xalay ka hadlayay munaasabad looga hadlayay ammaanka iyo horumarka degaanada Puntland waxaa kale oo uu sheegay in dhibaatooyinka ugu waaweyn ee heysta maamulkii hore ee Puntland ay ka mid yihiin in laga daba yimaado oo odayaal ay ka qeyliyaan haddii ciidamada ay dhaawacaan tuug qaadicul dariiq ah.
Dhinaca kale Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in dowladnimada iyo cadaaladda Puntland oo la helo ay ka tarjumeyso heykalkii dowladnimo lagu yaqiinay, wuxuuna hoosta ka xariiqay in ciidamada ammaanka kala duwan uu mideynayo.
“Ciidamada Puntland oo hadda meelo kala duwan ka amar qaata waan mideyneynaa” ayuu yiri Madaxweyne C/Weli Gaas oo sheegay in dhibaatooyinka ugu waaweyn ee hareeyay ciidamada ay ka mid tahay iyagoo aan hoos tegin hal talis isla markaana meelo kala duwan ka amar qaata. (523)
DAAWO SAWIRADA: Askar ka tirsaneyd Ciidanka Dowlada oo saakay lagu toogtay Goob fagaare oo kutaala MuqdishoMarch 11, 2014
WAR DEG DEG AH : Fanaankii Caanka ahaa ee Maxamed Suleymaan Tubeec oo ku dhintay Dalka….March 11, 2014
PUNTLAND oo Passaport-kii Soomaaliga ku xirtay shuruud beeleed yaab leh: Dhageyso yaabka taaganMarch 11, 2014
Daawo: Wariyihii Waraystay Pro Galaydh Oo Waraysi Kulul kaqaaday Dr Baadiyow Sir badan oo Fakatay Iyo Waxa dhacay ?March 11, 2014